Mawduucyada Macbadka Lavon ee ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Macbadka Lavon
U adeega waa iibinta cusub
Sabti, Febraayo 15, 2014 Sabti, Febraayo 15, 2014 Macbadka Lavon
Waxaan kaqeyb galay Indianapolis AMA qado halkaas oo Joel Book uu ugahadlay Suuqgeynta Awoodda Mid. Soo bandhigiisu wuxuu ka koobnaa macluumaad aad u tiro badan oo ku saabsan adeegsiga suuq geynta dijitaalka ah si loogu adeego macaamiisha si wax ku ool ah. In kasta oo, ay jireen dhawr waxyaalood oo laga soo qaatay barnaamijka, waxaa jiray mid aniga igu dhegay. Fikradda ah: u adeegiddu waa iibinta cusub. Asal ahaan, fikradda ah caawinta macaamilku waxay ka waxtar badan tahay sida joogtada ah ee loo isku dayo in loo iibiyo iyaga. Sidee
Waa Dayr oo macnaheedu yahay ku soo noqoshada dugsigu si xawli ah ayuu ku socdaa ardayduna waxay ku soo laabanayaan fasalka. Si kastaba ha noqotee, Waqtiga. La soco in kastoo ay tahay bisha Ogosto, haddana dhowr qof ayaa durba bilaabay inay eegaan fikradaha hadiyadda. Haddii ay ku helaan qiimaha saxda ah, way sii socdaan oo waxay iibsadaan inay ka horreeyaan ciyaarta. Meeleynta emaylkaaga u dir dhagaystayaashaas iyo emayllada farsamada si aad ugu qabsatid kuwa wax iibsanaya. Ee
Isbedelka Suuqgeynta Emailka: Isticmaalidda Calaamadaha Gaarka ah ee Khadadka Mawduuca
Monday, July 23, 2012 Khamiista, Noofembar 22, 2012 Macbadka Lavon
Qiyaastii Maalinta Jacaylka sannadkan, waxaan ku arkay dhawr urur oo adeegsanaya qalbi mawduucooda. (Si la mid ah tusaalaha hoose) Tan iyo markaas, waxaan arkay shirkado badan oo bilaabaya inay astaamo u adeegsadaan khadadka mawduucyadooda si ay u soo jiitaan dareenka akhristaha. Isticmaalka jilayaal qaas ah oo ku jira laynka mawduuca waa mid ka mid ah isbeddellada emayl ee ugu dambeeyay ururro badanna horay ayay uga boodayaan guddiga. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan weli helin,
3 Qalabka Suuqgeynta Emailka Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato
Monday, June 11, 2012 Khamiis, Juun 10, 2014 Macbadka Lavon
Qoraal u qor - Haddii aad la shaqeyneyso wakaaladda suuqgeynta iimaylka, waxay u badan tahay inay mar horeba xiriir la yeelan doonaan lammaane ku siiya qoraalka inuu ku biiro muuqaalka. Qoraalka ku qor Subscribe waa aalad suuq geyn email ah. Waa gacmo ka baxsan habka loo kobciyo liiska suuqgeynta emailkaaga. Suuqgeyaasha emailkaagu waxay waqti ku qaataan inay tan dejiyaan intaad fadhiisanayso oo aad daawanayso sida ay u socoto. Dadaal yar, waxaad arki doontaa sida
Sida Loo Sameeyo Emailkaaga Suuqgeynta Mobaylka
Monday, May 14, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Macbadka Lavon
"Sannad-sannadka, laga bilaabo Maarso 2011 illaa Maarso 2012, emaylku wuxuu ku furmayaa aaladaha mobilada koray 82.4 boqolkiiba," sida laga soo xigtay tirakoobka mobilada Return Path. Ka dhigitaanka qayb ka mid ah dadaalka suuqgeynta emaylkaaga mar dambe maahan ololeyaal emayl oo horumarsan; waa lama huraan. Dhawaan, Delivra waxay daabacday Sida Loo Sameeyo Emailkaaga Suuqgeynta Mobilada Saaxiibtinimo, waa kheyraad bixiya isbeddellada wareega ee 2012, tirakoobka, iyo talooyinka ku saabsan sida loo diyaariyo suuqgeynta emailkaaga ee loogu talagalay dhagaystayaashaada socdaalka ah. Warqada cad ayaa ka hadlaysa
Waqtiga Guga Nadiifi Barnaamijkaas Suuqgeynta Emailka
Isniin, April 16, 2012 Wednesday, April 11, 2012 Macbadka Lavon
Waa mar kale sanadka. Maalmuhu way sii dheereeyaan cimiladuna way ka fiican tahay. Dadku badanaa waxay ka faa'iideystaan ​​xilliga guga si ay u awoodaan inay nadiifiyaan guryahooda min kor ilaa hoose. Waan ogahay inaan mar hore sifiican uga nadiifiyay hoygayga hoose. Maaha fikrad xun inaad u turjunto nadaafad barnaamijka suuq geynta emaylkaaga. Waa kuwan qaar ka mid ah talooyinka nadiifinta guga: Is xoq! Qaado wakhti aad si fiican u xoqdo liisaskaaga. Soo hel
3 Ka Qaad-Jidka 5 Fure illaa Suuqgeynta Emailka Gaarka ah
Isniin, April 2, 2012 Sabtida, Oktoobar 25, 2014 Macbadka Lavon
Sida laga soo xigtay Daraasadda 'MarketingSherpa Benchmark Survey' ee 2012, dhowr shirkadood ayay u badan tahay inay kordhiyaan miisaaniyaddooda email wax ka badan 30% sannadka 2012. Si kastaba ha noqotee, Delivra waxay ogaaneysaa in shirkadaha badankood ay wali la halgamayaan isla xeeladaha aasaasiga ah ee emaylka - liiska dhismaha, waxyaabaha ku jira, is-dhexgalka . Waqti u qaado inaad diirada saarto aasaasiga; waa fikradahan aasaasiga ah
Isniin, February 20, 2012 Arbacada, February 15, 2012 Macbadka Lavon
Kahor intaadan bilaabin go'aaminta sida loo abuuro emayl ku habboon moobiilku, waa inaad isweydiisaa "Maxay yihiin kuwa kuu soo diraya si ay u eegaan emaylkaaga?" haddii aad go'aansato in loo baahan yahay emayl filaayo in moobiilku shaqeynayo, markaa waa waqtigii la bilaabi lahaa ka fiirsashada sida loo sameeyo abuuristiisa. Waa kuwan qaar ka mid ah tilmaamaha lagu abuurayo emayllada diyaarka u ah ololeyaasha emaylkaaga. 1. Khadadka Mawduuca. Qalabka mobilada waxay u egyihiin inay jaraan khadadka maaddada emaylka oo gaaban